musha Products DataNumen Outlook Repair Inbox Kugadzirisa Chishandiso hangs
Inbox Repair Turu Inorembera Paunenge Uchigadzirisa Uori kana Yakakuvadza Mafaira ePST
Paunoshandisa Outlook Inbox Repair Tool (Scanpst.exe) kugadzirisa rakakanganisika kana rakashatisa faira reOxpress mafaira (PST) faira, pachinzvimbo chekuita basa rekugadzirisa, chishandiso chinorembera zvisingagumi uye hachipindure kune mirairo yemushandisi. Kana iwe ukavhura Windows Task Manager, iwe unowana chinzvimbo chechishandiso chiri "Kwete Kupindura". Kana iwe ukavhara iyo application nenzira isiriyo uye restart iyo kugadzirisa-zvakare iyo faira, iwe uchagara uchiwana zvakafanana mhedzisiro.
Uori kana kukuvara kweiyo PST faira inorema uye yakaoma. Kana Inbox Kugadziridza Chishandiso (Scanpst) ichiedza kugadzirisa iyo faira, inozomhanya ikafa zvishwe zvisingaperi uye haigone kugadzirisa iyo faira zvakare.